एएसडी बोर्ड सदस्य
हाम्रो बारेमा एएसडी समुह एएसडी कार्यकारी समिति
एएसडी बोर्ड सदस्य	अध्यक्ष
सुशील प्याकुरेल नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा नेपालको प्रमुख मानवअधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का संस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँ विगत तीन दशकदेखि मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरेबापत सन् २०१० मा ग्वाङ्जु पुरस्कार पाउनु भएको छ। एएसडीमा उहाँले समसामयिक विषयमा बोर्डलाई निर्देशित गर्नुहुन्छ।
अमुदा श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनका प्राध्यापक र राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरिसक्नु भएको छ। एएसडीमा उहाँले महिला, शिक्षा र सञ्चारमाध्यमका विषयमा सल्लाह-सुझाउ दिनुहुन्छ।
विनोद भट्टराईले नेपालका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हाल तालिम दिने र पढाउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँ पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन लगायतका व्यवस्थापन विषयमा अनुसन्धान गर्न रुचाउनुहुन्छ। एएसडीमा उहाँले सञ्चारमाध्यमका क्षेत्रमा परामर्श दिनुहुन्छ।
दीपक थापा सोशल साइन्स बहाःका निर्देशक हुनुहुन्छ।
मन्दिरा शर्मा मानवअधिकार वकिल र एड्भोकेसी फोरमका संस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँ दुई दशकदेखि मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। एएसडीमा उहाँले मानवअधिकारका विषयमा परामर्श दिनुहुन्छ।
हीरा विश्वकर्मा विकास व्यवस्थापनविद् तथा दलित समुदायको हकहितका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ दलित अध्ययन तथा विकास केन्द्र का कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ दुई दशकदेखि विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। एएसडीमा उहाँले मानवअधिकार र सञ्चारमाध्यम विषयमा परामर्श दिनुहुन्छ।
डा. मुक्तासिंह तामाङ
डा. मुक्तासिंह तामाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र/मानवशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ। उहाँले कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा पीएचडी गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक समावेशीकरण, नेपाल र दक्षिण एसियाका आदिवासी र अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहका बारेमा धेरै अनुसन्धान गर्नु भएको छ। उहाँ विकासको सहभागितात्मक र अधिकारमुखी अवधारणाका ख्यातिप्राप्त स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ।
डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण
डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण सामाजिक अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले चार दशकभन्दा लामो समयदेखि समाजलाई पुर्‍याएको प्राज्ञिक योगदान तथा समाज सेवाका लागि ख्याति कमाउनु भएको छ। हाल उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ।